လောကမှာ စုန်ရေပဲရှိသလို မိဘမေတ္တာဆိုတာလည်း သားသမီးတွေအပေါ်အမြဲ စီးဆင်းနေမှာပါ
သားလတ်ကလေးရေ ဗေဒင်လို့ ရေးထားတဲ့ စုဗူးရယ် …မကျည်းရွက်လို့ ရေးထားတဲ့စုဗူးရယ် အမေ့ကိုယူလာပေး။ ဒီမနက် အဖေ အမေတို့အိမ်မှာ “သားလတ်ကလေးရေ ဗေဒင်လို့ ရေးထားတဲ့ စုဗူးရယ် …
မကျည်းရွက်လို့ ရေးထားတဲ့စုဗူးရယ် အမေ့ကိုယူလာပေး” ကျနော်ယူလာတော့ အဖေကပြောတယ် “ဟေ့ရောင် ဗေဒင်ကိုထားခဲ့ မကျည်းရွက်က နှစ်ဗူးရှိတာ မကျည်းရွက်တွေပဲ ယူလာ” ကျနော် အဖေပြောတဲ့အတိုင်း ယူလာပေးလိုက်တယ်။
စကောထဲ စုဗူးနှစ်လုံးဖောက်ချ ပိုက်ဆံရေကြတယ်။စုစုပေါင်း275000ကျော် အရင်နှစ်က သုံးသိန်းလောက်ရသတဲ့ ဒီနှစ်နဲသွားသတဲ့ အမေပြောတာ…. ရွာမှာ အဖေနဲ့အမေ အိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာ စားလောက်ရုံမကပါဘူး။ပိုငွေတောင်နှစ်စဉ် အလှူအတန်း လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေကနေ့စဉ် အားတဲ့အချိန်တိုင်း ရွာရိုးတလျှောက် မကျည်းရွက် ကင်းမုံရွက် ကျီးအာရွက် ကြက်ဟင်းခါးသီးအကုန်လိုက်ခူးတယ်။
ရွာမှာနေတဲ့ ဝမ်းကွဲအမက ကျနော့်ကိုဖုန်းဆက်ပြီး အမြဲပြောတယ်…အမေကတော့ ဘယ်သူပြောပြောခူးမြဲ…. အဖေလေ သူဗေဒင်ဟောလို့ရတဲ့ငွေ သူတောင်းစား အိမ်ရှေ့လာတောင်းရင် အနည်းဆုံး ငါးရာတန်ပေးတာဗျ …ကျနော်က အကြွေရှာတုန်း…. အမေ ဟင်းရွက်ရောင်းရသမျှပိုက်ဆံ စုဗူးထဲထည့်တာ သူ့အတွက်အပိုဝင်ငွေတဲ့ အဖေ ဗေဒင်ဟောလို့ရတဲ့ငွေ စုဗူးထဲထည့်တာ သူ့အတွက်အပိုဝင်ငွေပါတဲ့….
ကျနော့်အမေ ဘယ်လောက်စံနစ်ကောင်းသလဲ ပိုက်ဆံကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ခေါက် အပ်ချည်နဲ့ချည်ပြီး စုဗူးထဲထည့်တာ များများဆံ့အောင်လေ ခေါက်တာစုဗူးထဲရောက်သွားရင်အခေါက်ပြေပြီး အများကြီးမဆံ့တော့ဘူးဆိုပဲ….
မနက်ဖြန် ကျနော်ပြန်မယ်ပြောတော့ အဖေက “အမေကြီး မင့်သားပြန်ရင် ပိုက်ဆံပေးလိုက်အုံး “တဲ့…. ဓပေးနိုင်ပါဘူးတော် သူ့လည်းပိုက်ဆံပါတာပဲ တပေါင်းအလှူလုပ်ဖို့စုထားတာ” အဲ့လို အမေပြောတော့ အဖေပြန်ပြောတာ ကျနော်မျက်ရည်လည်မိတယ်။
“အမေကြီး မင်းနေမကောင်းလို့ မင့် သားလာရတာ မင်းမှာတာဝန်ရှိတယ် ပေးလိုက်ပါကွာ “တဲ့….မိဘဆိုတာ ဒီလိုပါလို့ပြောပါရစေ တစ်ချို့မိဘတွေတော့ကျနော်မသိဘူး။ ကျနော်လည်းမိဘအရွယ်မို့ ဆုတောင်းမိတယ်။ငါ့မိဘလို မိဘမျိုးကလွဲလို့ အခြားမိဘတွေလိုမဖြစ်ပါရစေနဲ့ ကျနော့် မိဘလို မိဘမျိုးဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်း ကြိုးစားသွားမယ်ဗျာ….
ကျနော်တတ်နိုင်သလောက်ကန်တော့ခဲ့တယ် ။ဒါတောင် အဖေက အိပ်ယာဘေးလာပြီး “ငါ့သား မင်းအမေ မသိအောင်သိမ်းထားတာရှိတယ်။ကလေးတွေအတွက်ယူသွား”တဲ့ လာပေးနေသေးတာ အဖေနဲ့အမေက အသက်၇၀ကျော် ခုချိန်ထိ မြေးတွေကို ကျွေးတုန်း ပေးတုန်း ခုချိန်ထိ ရှာတုန်းဖွေတုန်း လှူဒါန်း ပေးကမ်းတုန်း ကျနော်သူတို့လိုဖြစ်ချင်တာသူတို့ဆီက အတုရောအစစ်ရောယူမယ်ဗျာ….
Credit – Minn Khaing
သားလတျကလေးရေ ဗဒေငျလို့ ရေးထားတဲ့ စုဗူးရယျ …မကညျြးရှကျလို့ ရေးထားတဲ့စုဗူးရယျ အမကေို့ယူလာပေး။ ဒီမနကျ အဖေ အမတေို့အိမျမှာ “သားလတျကလေးရေ ဗဒေငျလို့ ရေးထားတဲ့ စုဗူးရယျ …မကညျြးရှကျလို့ ရေးထားတဲ့စုဗူးရယျ အမကေို့ယူလာပေး” ကနြျောယူလာတော့ အဖကေပွောတယျ “ဟရေ့ောငျ ဗဒေငျကိုထားခဲ့ မကညျြးရှကျက နှဈဗူးရှိတာ မကညျြးရှကျတှပေဲ ယူလာ” ကနြျော အဖပွေောတဲ့အတိုငျး ယူလာပေးလိုကျတယျ။
စကောထဲ စုဗူးနှဈလုံးဖောကျခြ ပိုကျဆံရကွေတယျ။စုစုပေါငျး275000ကြျော အရငျနှဈက သုံးသိနျးလောကျရသတဲ့ ဒီနှဈနဲသှားသတဲ့ အမပွေောတာ….
ရှာမှာ အဖနေဲ့အမေ အိမျဆိုငျလေးဖှငျ့ထားတာ စားလောကျရုံမကပါဘူး။ပိုငှတေောငျနှဈစဉျ အလှူအတနျး လုပျနိုငျပါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမကေနစေ့ဉျ အားတဲ့အခြိနျတိုငျး ရှာရိုးတလြှောကျ မကညျြးရှကျ ကငျးမုံရှကျ ကြီးအာရှကျ ကွကျဟငျးခါးသီးအကုနျလိုကျခူးတယျ။
ရှာမှာနတေဲ့ ဝမျးကှဲအမက ကနြေျာ့ကိုဖုနျးဆကျပွီး အမွဲပွောတယျ…အမကေတော့ ဘယျသူပွောပွောခူးမွဲ…. အဖလေေ သူဗဒေငျဟောလို့ရတဲ့ငှေ သူတောငျးစား အိမျရှလေ့ာတောငျးရငျ အနညျးဆုံး ငါးရာတနျပေးတာဗြ …ကနြျောက အကွှရှောတုနျး…. အမေ ဟငျးရှကျရောငျးရသမြှပိုကျဆံ စုဗူးထဲထညျ့တာ သူ့အတှကျအပိုဝငျငှတေဲ့ အဖေ ဗဒေငျဟောလို့ရတဲ့ငှေ စုဗူးထဲထညျ့တာ သူ့အတှကျအပိုဝငျငှပေါတဲ့….
ကနြေျာ့အမေ ဘယျလောကျစံနဈကောငျးသလဲ ပိုကျဆံကို သပျသပျရပျရပျခေါကျ အပျခညျြနဲ့ခညျြပွီး စုဗူးထဲထညျ့တာ မြားမြားဆံ့အောငျလေ ခေါကျတာစုဗူးထဲရောကျသှားရငျအခေါကျပွပွေီး အမြားကွီးမဆံ့တော့ဘူးဆိုပဲ….
မနကျဖွနျ ကနြျောပွနျမယျပွောတော့ အဖကေ “အမကွေီး မငျ့သားပွနျရငျ ပိုကျဆံပေးလိုကျအုံး “တဲ့…. ဓပေးနိုငျပါဘူးတျော သူ့လညျးပိုကျဆံပါတာပဲ တပေါငျးအလှူလုပျဖို့စုထားတာ” အဲ့လို အမပွေောတော့ အဖပွေနျပွောတာ ကနြျောမကျြရညျလညျမိတယျ။
“အမကွေီး မငျးနမေကောငျးလို့ မငျ့ သားလာရတာ မငျးမှာတာဝနျရှိတယျ ပေးလိုကျပါကှာ “တဲ့….မိဘဆိုတာ ဒီလိုပါလို့ပွောပါရစေ တဈခြို့မိဘတှတေော့ကနြျောမသိဘူး။ ကနြျောလညျးမိဘအရှယျမို့ ဆုတောငျးမိတယျ။ငါ့မိဘလို မိဘမြိုးကလှဲလို့ အခွားမိဘတှလေိုမဖွဈပါရစနေဲ့ ကနြေျာ့ မိဘလို မိဘမြိုးဖွဈဖို့ ဆုတောငျး ကွိုးစားသှားမယျဗြာ….
ကနြျောတတျနိုငျသလောကျကနျတော့ခဲ့တယျ ။ဒါတောငျ အဖကေ အိပျယာဘေးလာပွီး “ငါ့သား မငျးအမေ မသိအောငျသိမျးထားတာရှိတယျ။ကလေးတှအေတှကျယူသှား”တဲ့ လာပေးနသေေးတာ အဖနေဲ့အမကေ အသကျ၇၀ကြျော ခုခြိနျထိ မွေးတှကေို ကြှေးတုနျး ပေးတုနျး ခုခြိနျထိ ရှာတုနျးဖှတေုနျး လှူဒါနျး ပေးကမျးတုနျး ကနြျောသူတို့လိုဖွဈခငျြတာသူတို့ဆီက အတုရောအစဈရောယူမယျဗြာ….